समाज Archives - Page 177 of 255 - Dna Nepal
५० बर्षिया महिलालाई बलात्कार गर्ने २१ बर्षिय किशोर पक्राउ १५ आश्विन २०७५, सोमबार ११:३१
पोखरा, असोज १६ । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका १ निस्कोटमा एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा युवक पक्राउ परेका छन् । निस्कोट स्थित छिसमा बस्ने २१ बर्षिय गोविन्द पुनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनले ५० बर्षिया महिलालाई बलात्कार गरेको..
गोरखाको मनास्लु पदमार्गमा ढुंगा खसेर एकजनाको मृत्यु
पोखरा, असोज १५ । मनास्लु पदमार्गमा ढुंगा खसेर लाग्दा एकजनाको मृत्यु भएको छ । चुमनुब्री गाउँपालिका–३ सल्लेरी भीरमा हिँडिरहेकी स्थानीय १७ वर्षीया सलिना गुरुङको मृत्यु भएको हो । माथिबाट खसेको ढुंगा लागेर गम्भीर घाइते भएकी सलिनालाई उपचारको..
२० वर्षका यूवाले ४० वर्षिया महिलालाई जवरजस्ती गरेपछि……
पोखरा, असोज १५ । गोरखाको पालुंटार नगरपालिका ९ चालिसेडाँडाका २० वर्षका एक यूवाले ४० वर्षिय महिलालाई जबरजस्तीकरणी गरेको अभियोगमा मुद्धा दर्ता भएको छ । गत ११ गते विहान साँढे एघार बजे जबरजस्ती करणी गरेको उजुरी परेको हो । उजुरीपछि प्रहरीले २०..
निर्मला हत्या प्रकरण–दोषी भनिएका कसैको पनि डिएनए मिलेन (के भन्छन् निर्मलाका बाबु ?) १४ आश्विन २०७५, आईतवार १४:५२
कञ्चनपुर, असोज १४ । निर्मला हत्या काण्ड यति चरम भयो कि, देशैभरी यसको विरोध भैरहेको छ । देशका उच्च पदका ब्यक्तिहरु नै बलात्कार र हत्यामा उत्रिएको आम मानिसको आशंका र आरोप छ । तर ति आरोपहरु पुष्टी हुने कुनैपनि प्रमाण छैन । केही शंकास्पद भनिएका र आरोप..
१५ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार !
डडेलधुरा, असोज १४ । डडेल्धुरामा १५ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ । जिल्लाको भित्रीमधेशमा पर्ने पशुराम नगरपालिकाकी एक किशोरीलाई स्थानीय २ युवाले बलात्कार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । असोज ९ गते राति..
पोखराबाट सुन र पैसा चोर्ने २ जना पक्राउ
पोखरा, असोज १४ । कास्कीको मादी गाउँपालिका ६ तप्राङकी एक महिलाको सुन र नगद चोरी गर्नेहरु पक्राउ परेका छन् । पोखरा १२ अस्पतालचोकबाट ५७ बर्षिय चित्र कुमारी गुरुङलाई ललाई फकाई साढे ३ तोला सुन र नगद १२ हजार चोरेर भागेको चोरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो..
पोखरामा स्कारपियो गाडी पल्टिँदा ४ घाईते
पोखरा, असोज १४ । पोखरा ३३ भरतपोखरीमा स्कारपियो गाडी पल्टिँदा ४ जना घाईते भएका छन् । ग १ य ९१८ नम्बरको स्कारपियो गाडि अचानक सडक देखी अन्दाजी ५० मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो । घाईतेहरुको गण्डकी मेडिकल कलेज र नमस्ते असपताल विरौटामा उपचार भैरहेको छ..
निर्मला हत्या प्रकरण–एसपी विष्टसहित ३ जनाको डिएनए रिपोर्ट आईपुग्यो १३ आश्विन २०७५, शनिबार १३:४२
कञ्चनपुर, असोज १३ । साउन १० गते बलात्कार गरी हत्या गरिएकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न भनी आशंका गरिएका तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्टसहित ३ जनाको डिएनए परीक्षण रिपोर्ट आइपुगेको छ । उक्त रिपोर्ट प्राप्त..
पोखरामा एकजना मृत फेला !
पोखरा, असोज १३ । पोखरा २६ बुढीबजारमा एकजनाको शव फेला परेको छ । अन्दाजी ६० बर्षका देखिने पुरुष मृत भेटिएका हुन् । हालसम्म उनको पहिचान हुन नसकेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ । घटनाबारे अनुसन्धान चलिरहेको छ..
पोखराका सहकारी र मनि चेञ्जर लुटेरा पक्राउ (घटना विवरण सहित)
पोखरा, असोज १३ । पोखराका विभिन्न ठाउँबाट सहकारी र मनि चेञ्जर लुट्ने एकजना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र वडा प्रहरी कार्यालय वैदामको टोलिले निरन्तर अनुसन्धान गरेपछि धनगढीका १८ बर्षिय कमल ठगुन्नालाई पक्राउ गरिएको हो ।..